Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Daawo Sawirada: Xaflad Qalin Jabin ah oo loo qabtay Dhaqaatiirtii ugu horeesay oo soo saarto Jaamacada Plasma
August 19 2017 01:00:21
Daawo Sawirada: Xaflad Qalin Jabin ah oo loo qabtay Dhaqaatiirtii ugu horeesay oo soo saarto Jaamacada Plasma
Waxaa magaalada Muqdisho Munaasabad balaaran loogu qabtay Dhaqaatiirtii ugu horeesay oo ka qalin jabisa Jaamacada Plasma ee magaalada Muqdisho.
Munaasabada qalin jabinta waxaa kasoo qeyb galay Wasiiro katirsan Xukuumada Soomaaliya, Xildhibaano, Midowga Dalladaha Jaamacadaha Soomaaliya, ,Ururada Dhaqaatiirta Soomaaliya ,Maamulka iyo Ardayda Jaamacada Plasma iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Waxaa ka hadlay Munaasabada Wasiir kuxigeenka Caafimaadka, iyo Agaasimaha Wasaarada Tacliinta Sare, waxa ayna dhamaan amaaneen Jaamacada Plasma doorta ay ka qaadatay in ay soo saarto dhaqaatiir da'yar ah oo si fiican loo carbiyay.
Munaasabada waxaa sidoo kale ka hadlay Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu ku jiro Xildhibaan Maxamed Omar Dalxa, waxa ayna Xildhibaanada dhankooda xuseen in ay ku faraxsan yihiin in ay goob joog ka noqdaan Munaasabada dhaqaatiirtan ku qalin jabineysay.
Gudoomiyaha Jaamacada Soomaaliya Dr Xasan Mohamed Xassan , oo dhankiisa ka hadlay Munaasabada qalin jabinta ayaa sheegay in dhaqaatiirtan xaflada loo qabtay ay yihiin 36-dhaqtar ayna noqonayaan kuwii ugu horeeyay oo dhaqaatiir ah oo ka qalin jabisa Jaamacada.
Waxa uu tilmaamay Gudoomiyaha in Jaamacada Plasma ay ka qalin jabiyeen arday aad u badan oo wax ka bartay kuliyaddaha kala duwan ee Jaamacada, waxa uuna intaa raaciyay in Jaamacada in ay u taagan tahay in bulsada Soomaaliyeed aqoontooda sare u qaado.
Jaamacada Plasma ayaa kamid ah jaamacadaha ugu horeeya ee kuyaala magaalada Muqdisho, waxaana Jaamacadan wax ka barta kumanaan arday oo ku kala nool gobolada dalka iyo Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.